Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ku sugan goobihii ay dhawaan kala wareegeen Maleeshiyaadka Riddada. | Halganka Online
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ku sugan goobihii ay dhawaan kala wareegeen Maleeshiyaadka Riddada.
Dhawaan ayay ahayd markii ay la wareegeen Mujaahidiinta Wilaayasda Islaamiga ah ee Banaadir goobo hor leh kuwaas oo kaabiga ku haya Madaxtooyada ay ka taliso Saliibiyiinta Amisom iyo murtadiinta halkaa lagu ilaaliyo.
Cabsi aad u weyn ayaa waxay la soo daristay ciidamada saliibiyiinta iyo Madaxda murtadiinta kadib guulahii ay gaareen mujaahidiinta ee keentay in la soo gaaro iridaha Madaxtooyada iyaga oo ka cabsanaya in mar kali ah laga dul dago sida ku dhacday goobihii hore ee ay ku sugnaayeenba.
Intii lagala wareegay maleeshiyaadka Riddada iyo kuwa saliibiyiinta goobihii ay ku sugnaayeen ayaa waxay sameeyeen isku dayo fara badan kuwaas oo ay ku doonayaan in ay dib u qabsadaa fariisimaha cusub ee ay hada ku suganyihiin mujaahidiintu, taasoo ay geesiyada islaamku jilibka u aasteen.
Weeraradii ugu danbeeyay ayaa waxaa ka soo qeyb galay kuwa Burundi oo carcar qaba halkaana waxay isku haleeleen ciidamada Liwaaga Cali Bin Abii Daalib oo ku celiyay xeryihii ay ka soo duuleen, weerarkan ayaa waxa uu ahaa isku daygii ugu danbeeyay ee ay sameeyeen ciidamada Burundi.
Ciidamada Saliibiyiinta ayaa waxay maciin bideen duqeymo ay u gaysanayaan deegaanada ka fog meelaha lagu dagaalamayo, duqaymahaas oo ay dhibaato kusoo gaarsiiyeen shacab Muslimiin ah oon waxba galabsan. Gumaadka ay geysanayaan ciidamada kirishtaanka ah ayaa wuxuu kiciyay kumanaan qof kuwaas oo balan ku galay in ay la dagaalami doonaan wadankoodana ka saari doonaan Gaalada Kirishtaanka ah, waxaana jiray isku soo baxyo waaweyn oo ka dhacay Wilaayaat-ka Islaamiga ah oo arimahaas ku saabsanaa.
Masaajidka ku yaala Magaalada Muqdisho ayaa Jimcihii dhawaa waxaa lagu uruuriyay Hub fara badan kuwaas oo ay ku dagaalami doonaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Muqdisho oo raba in ay iska dul qaadaan dulmiga Saliibiyiinta.
Maalmihii ugu danbeeyay ayaa waxaa laga dareemayay suuqa weyn ee lagu iibiyo hubka dhalinyaro fara badan oo iibsanaysa hub kala duwan sida AK47, PKM iyo RPG-ga, dhalinyaradan ayaa waxaa wajigooda laga dareemaayay kacsanaan ay ka xanaaqsan yihiin duqeymaha Saliibiyiintu ay ku mirayaan habeenkii guryaha rayidka.
Mid ka mid ah ardeyda wax kabarata magaalada Muqdisho oo kamid ahaa dhaliyaradii hubka iibsanaysay ayaa waxa uu sheegay in uu waxbarashadiis joojinayo ilaa inta ay iska saarayaan ciidamadan duullanka ku jooga.
“Wax kasta oo aan baranaayay waxaan ka door biday in aan qorigan iibsado oo aan iska dhicino cadowga nagu soo duulay wax barashdeydana aan hakiyo, marka aan iska saarno gaaladana aan wax barashadayda sii wato” ayuu yiri mar uu la hadlayay mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho.
Gaalada Afrika oo hada ku shiraysa Kampala ayaa wal wal iyo walbahaar daran qabta kadib markii ay xaqiiqsadeen in shacabka Muslimka ah ee Soomaaliyeed u soo jeestay sidii uu iskaga dhicin lahaa dulmiga ay Ciidamada gaaladu ku hayaan, waxa kale oo jira cabsi taas lamid ah oo la soo gudboonaatay Gaalada midowday iyo Maraykanka oo ka war warsan Shacabkan kacsan ee diyaarka u ah la dagaalanka Gaalo walba oo timaad.
« Culumadii u Hambalyeysay Heshiiskii Dhexmaray Zenawi iyo Ibraahim-dheere (Dhegeysi) Baadari Museveni: “Afrika waa in aan argagixisada ka saarnaa oo aan u celinaa meeshii ay ka yimaadeen oo ah Aasiya iyo Bariga dhexe”. »